Ahoana ny fampidinana ny VLC Media Player ho an'ny Mac? - Pc
Ahoana ny fampidinana ny VLC Media Player ho an'ny Mac?
Manantena ny hahazo VLC Media Player ho an'ny mac? Androany dia hifarana ny fikarohanao. Nanomana lahatsoratra feno ho anao izahay izay misy famerenana amin'ny antsipiriany ny haino aman-jery VLC ho an'ny Mac. Miaraka amin'izany dia nampiditra torolàlana tsikelikely koa izahay hametrahana VLC amin'ny Mac ary nanonona fiasa mahafinaritra momba ny haino aman-jery VLC. Noho izany, omeo vakiana feno ity lahatsoratra ity mba hahafantaranao ny zava-drehetra momba ny VLC Media Player.
VLC Media Player - Fampahalalana fohy
Amin'ny anarany, mety efa nahazo ianao fa ny VLC dia mpilalao haino aman-jery iray izay ampiasaina hijerena horonantsary alaina eo an-toerana ao amin'ny PC-nao. Rehefa manala ireo kapila kapila amin'ireo maodeliny i MacBooks, dia miaraka amina rindrambaiko mora ampiasaina izy io hanampiana anao hijery ireo horonan-tsary sy sary.
Ny endrika feno VLC dia ny Video LAN Client, ary izy io dia mpilalao haino aman-jery marolafy malalaka sy loharanom-baovao malalaka sy loharano malalaka izay milalao ny ankamaroan'ny rakitra multimedia amin'ny fomba mora. Mety tsy manahy momba ny horonan-tsary / feo na sary ianao na hisokatra izany na tsia. Azonao atao ny misintona ny rindrambaiko VLC amin'ny fitaovana rehetra maimaim-poana satria manohana sehatra hafa. Mpilalao VLC koa dia manohana playback 4k sy 8k, ka amin'ny ho avy, raha te-hanatsara ny efijery mac-nao ianao dia efa manana izany tohanan'ny VLC izany.
Ahoana ny fametrahana VLC Media Player amin'ny MAC
Ity fizarana ity dia hahita ny dingana fampidinana ny mpilalao VLC ho an'ny MAC; aza misalasala manaraka.
Voalohany indrindra, mila mitsidika ny tranokala ofisialin'ny VLC Media Player .
Mikorisa ambany mandra-pahitanao ny 'misintona VLC ho an'ny MAC.'
Tsindrio ny bokotra volomboasary, izay manao hoe, 'Ampidino ny VLC', alao antoka fa hampidina ilay kinova farany ianao ho an'ny traikefa tsara indrindra; amin'izao fotoana izao, ny kinova dia 3.0.11.1 hatramin'ny 30/10/2020.
Apetraho ny fonosana, ary avy eo vonona ny handeha ianao. Azonao atao koa ny manohana ny orinasa amin'ny fanomezana ho azy ireo, saingy miankina aminao tanteraka izany.
Iray amin'ireo mpilalao haino aman-jery be mpampiasa indrindra any izy io. Malaza be mihitsy aza izany amin'ny alàlan'ny meme ary izy no tsara indrindra rehefa miresaka momba ny UI sy miasa. Mba hijerena ny fampiharana dia sokafy ny horonan-tsary eo amin'ny fitaovanao. Eo ambany, ho hitanao ny mpilalao ahafahanao mifehy ny filalaovana horonantsary; ny tarika ambony dia misy safidy maro, izay hodiavinay amin'ity fizarana ity. VLC dia miaraka amin'ny endri-javatra iray manontolo izay manao azy ho tsara indrindra amin'ny mpilalao horonantsary hafa. Ireto ny sasany amin'ireo fiasa an'ny VLC Media Player.
1. Fanitsiana volume
Ny zavatra mahafinaritra momba ny haino aman-jery VLC dia ny habetsaky ny avo mihoatra ny 100%, izay midika fa raha tsy dia mafy be ny fivoahan'ny horonantsary dia azonao atao ny mampitombo ny habetsaky ny fampiasana ilay slider, ary VLC no hikarakara azy ary manatsara ny asa ho anao. Raha tsy ampy koa izany dia azonao atao ny manindry ny fanitsiana sy ny endri-javatra eo amin'ny zoro ambany; avy eo, ho azonao atao ny manitsy ny ekitera, ny compresseur ary ny stabilizer ao anaty fikirana. Hahita slider ianao, ary afaka manova ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra ambony na midina.
2. Famaritana famirapiratana
Raha mieritreritra ianao fa maizina loatra ny horonan-tsarinao na tsy manohana ny horonan-tsary ny famirapiratana dia azonao atao ny mandeha amin'ny safidy vokarin'ny horonantsary ary mankanesa any amin'ireo safidy ilaina ary manitsy ny fifanoherana misy ny famirapiratan'ny hue, ary ny saturation mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Izy io koa dia miasa amin'ny maha-mpamoaka horonantsary azy; lazao fa te-hanapaka ny ampahany sasany amin'ilay horonan-tsary ianao, mandehana mijery> Fanaraha-maso mandroso> Alefaso ny faritra amin'ilay horonan-tsary tianao hampidirina, kitiho ny bokotra miendrika faribolana mena hanombohana ny fandraketana ary rehefa misaraka ianao dia tsindrio eo ny bokotra mitovy hanakanana ny fandraisam-peo. Toy ny recorder de écran fa ho an'ny MAC. Aorian'izany dia mila mahita ny galeri-tsarimihetsika fotsiny ianao, ary afaka mahita ny ampahany novaina avy amin'ny horonantsary lehibe. Hetezo fotsiny ny ampahany amin'ny horonan-tsary amin'ny horonantsary efa misy.
4. Fomba nahazoana lalana
Endri-javatra mahafinaritra iray hafa an'ny mpamaky haino aman-jery VLC dia ny fahafahanao manaparitaka horonantsary rehetra, mandika ny rohy amin'ilay horonan-tsary tianao alefa ao amin'ny VLC, avy eo mandehana amin'ny media, izay misafidy ny safidy Misokatra renirano tambajotra, avy eo azonao apetaka ny rohy mivantana amin'ny habaka banga omena azy io dia mila fotoana fohy ny famoahana azy, saingy hilalao izy io, alao antoka fa manana Internet haingana ianao.
Amin'ny fampiasana ilay fitaovana, azonao atao koa ny misintona ny fisie amin'ny alàlan'ny fandraisam-peo, ary avy eo dia ho hita eo amin'ny rafitrao eo an-toerana ny rakitra video. Ohatra, raha tianao ny horonan-tsary amin'ny YouTube dia azonao atao ny mandika ireo rohy ary apetaho. Handefa mivantana azy ireo avy any YouTube ianao, tsy mila mampiasa rindrambaiko ankolafy ratsy ampidino ireo horonan-tsary .
Raha manana fakan-tsary (fakan-tsary) ianao, dia azonao atao ihany koa ny mandray ny fihetseham-ponao amin'ireo horonantsary. Raha te hiditra amin'ilay safidy dia mankanesa any amin'ny haino aman-jery, avy eo mifidiana fitaovana fisamborana misokatra, avy eo ambanin'ny fitaovana fakana eo ambanin'ny anaran'ny fitaovana, safidio ny anaran'ny fitaovanao.
Azo ampiasaina ho a mpanova horonan-tsary . Mandehana any amin'ny media fotsiny, avy eo avadiho ary tahirizo, ho hitanao ny fisokafan'ny haino aman-jery misokatra, avy eo safidio ny rakitra haino aman-jery tianao hivadika, avy eo tsindrio ny hiova ary hamonjy aorian'izay dia afaka misafidy safidy maro ianao eo ambanin'ny sora-baventy, azonao atao ny ihany koa hiova ho mp4 , OGG, ary endrika video an-taonina.
7. Fanohanana Subtitle
Azonao atao koa ny manampy dikanteny amin'ny clip rehetra, mankanesa any amin'ny safidy manampy dikanteny, sintomy ny rakitra SRT ho an'ny dikanteny ary avy eo safidio ny safidy rehefa tonga ny pop up; aorian'ny fampidirana ireo dikanteny dia aseho eo amin'ny zoro ambony ambony ny hafatra. Azonao atao ihany koa ny tsindrio havanana amin'ny horonan-tsary.
7. Lahatsary marobe amin'ny fampiharana mitovy
Azonao atao ihany koa ny milalao horonan-tsary marobe amin'ny takelaka samihafa amin'ny alàlan'ny fandefasana indray ilay rindranasa, avy eo sintomina ary alatsaho ilay rakitra tianao hojerena ao amin'ny VLC. Mamonjy fotoana sy ezaka be dia be io satria tsy mila mahita ny horonan-tsarinao amin'ny lahatahiry iray manontolo ianao.
8. Fanohanana amin'ny pikantsary
Raha te haka pikantsary mahatalanjona sy mangatsiatsiaka avy amin'ny VLC ianao dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny safidinao amin'ny horonantsary ary avy eo dia kitihoo maka pikantsary.
9. Fidirana haingana
Misy safidy fidirana haingana koa izay hahafahanao miditra amin'ny fipihana ankavanana amin'ny totozy. Ho mora kokoa aminao ny hahita ny safidinao ary mampiasa azy eo noho eo. Ny zavatra toy ny fanovana ny tahan'ny lafiny video dia azo atao amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny menio haingana.
· Hanome anao safidy ilay rindrambaiko izay tsy misy mpilalao horonantsary hafa hanome fanitsiana horonantsary ara-potoana, fandefasana horonantsary an-tserasera, fitaovana mandroso hanamboarana ny zavatra niainanao.
· Izy io dia iray amin'ireo rindrambaiko horonantsary tsara indrindra misy sy takiana mafy eo amin'ny tsena.
· Mamela anao misintona votoaty mivantana amin'ny fitaovanao ianao nefa tsy manahy na inona na inona.
· Manana ny interface-n'ny mpampiasa madio indrindra ary mora ampiasaina sy azo idirana.
· Manana safidy tsara ho an'ny audiophile.
· Mahazo fanavaozana tsy tapaka sy patch patch.
Izay tsy tianay
· Rehefa cranked ny volume hatramin'ny 200% dia manakana ny kalitaon'ny feo izany.
Aorian'ny famakiana ity lahatsoratra ity dia manantena izahay fa mety nanana hevitra momba ny VLC ianao. Manana tombony betsaka noho ny mpilalao horonantsary nentim-paharazana hafa; Ankoatr'izay, izy no mpilalao horonantsary malaza indrindra miaraka amin'ny fanohanana hatramin'ny 8K somary futuristic, sa tsy izany? Ka inona no andrasanao? Araho ny dingana sy sintomy ny fampiharana ho an'ny Mac?
Raha manana eritreritra na fanontaniana momba ny VLC amin'ny Mac ianao dia ampahafantaro anay ao amin'ny boaty hevitra etsy ambany.
App Netflix ho an'ny Mac
aiza no hijerena fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana amin'ny Internet
mpamorona mozika fanondranana jam mp3 android
sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana mandefa tsy misoratra anarana na misintona
hulu maimaim-poana amin'ny spotify